ilmahaaga ku caawi in dugsiga | USAHello | USAHello
Bilowgii dugsiga xiiso leh iyo adag. Waxaad u baahan doontaa in aad ilmahaagu uga caawiso dugsiga. Baro sida loo taageerada caruurta ee dugsiga iyo caawin gooddigayga.
dugsiga waa meeshii carruurta qaataan wakhtiga intiisa badan. Waxay bartaan luqada iyo dhaqanka ee dugsiga. Waxaa muhiim ah si ay uga caawiyaan waalidka. laga yaabaa in aadan si fiican u aqoon Ingiriis, laakiin waxaa jira siyaabo badan oo aad ku caawin kara ilmahaaga. Oo waxaad iyaga ku muujin karaan sida si ay isu caawiyaan! Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah fikradaha kaa caawin doona inaad caawin ilmahaaga dugsiga.
Talooyin da'da ah oo dhan
Weydii ilmahaaga oo ku saabsan dareenkiisa
had iyo jeer ilmaha ee dugsiga kuma ay hadlaan oo ku saabsan dareenkiisa. Waxay la kulmi karaan dhib waxa ku jira, laakiin waxaa laga yaabaa ma ay rabaan in ay noqon ka walaacsan Aharok. Weydii inta badan sida ay dareemaan. Waxay u badan tahay in aad u sheegto oo ku saabsan dhibaatooyinka ay haddii la codsado waa.
Booqo dugsiga ilmahaaga la
Way adag tahay si ay u bilaabaan dugsiga cusub. Booqo dugsiga ilmahaaga ka hor maalinta koowaad ee dugsiga. Tani waxay ka caawisaa iyaga ma in lagu khaldo ama dadka ka lumay dadkii maalinteedii kowaad.
Raadi wax ku saabsan ciyaaraha iyo hawlaha kale ee
Caruur badan ayaa ka ciyaaro kooxaha isboortiga United States. Qaar kalena waxay ku biiro kooxo ama ciyaaro music dugsiga ka dib. Waad og tahay haddii ilmahaagu uu xiiseynayo in kasta oo waxqabadyada. Sports caawin doona ilaaliyaan caafimaadkooda iyo saaxiibo sameystaan.
Waxaan ka heli howlaha ciyaaraha iyo hawlaha kale ee
Isku day in aad iibsato buugaagta iyo siisa ilmahaagu u baahan yahay inta aan la bilaabin daraasadda. Haddii aadan bixin karin kharashka qalabka dugsiga, la hadal macalinka ilmahaaga. Waan kuu sheegi doonaa halka aad caawimo ee qalabka dugsiga ka heli kartaa.
dugsiyada American ka welwelaysaane daryeelka carruurta iyo dadka wax barayay. Sidoo kale, macalimiinta iyo Mareykanka ay yihiin kuwo aad si toos ah. Waxaad u baahan doontaa in aad la hadasho wax ku saabsan wixii dhibaatooyin dabeecadeed. Waayo, ilmo aad u yar ee dugsiga, waxaa laga yaabaa in ay kuu sheegaan oo ku saabsan arrimaha la jidhkooda. Tusaale ahaan, macalinka dugsiga ka hor ah waxaa laga yaabaa in aad u sheegto in ilmahaagu ka cabanaya dhibaatooyin caloosha ama dhibaato ka soo finan maqaarka ah. Haddii taas oo ka dhigaysa in aad raaxo, xusuusnow in macalinku waxa uu isku dayayaa si ay u caawiyaan ilmahaaga. Waxaad taageeri kartaa ilmahaaga macalinkiisa iyagoo ka hadlaya daacad ah oo ku saabsan dhibaatooyinka iyo xal loogu heli lahaa.
Xannaano-maalmeedka iyo iskuulka ka hor
Carruurta bilaabi kartaa socday in xannaano maalmeedka marka ay caruurta yihiin. Carruurta qaarkood aadi kartaa (Maalinta dan) Yaa ka warbixin laba bilood jir ah. Sida caadiga ah waxay leeyihiin carruurta da'da 4 Or 5 Years marka ay bilaabaan dugsiga barbaarinta. Tani waa marka ay u baahan tahay caawimaad ugu.
Raadi dharka iyo kabaha ay fududdahay in la xidho oo iyaga ka qaadataa
Macallimiinta ee daryeelka xanaanada carruurta iyo maalinta carruurta badan baro in ay xirtaan dhar iyo caawiyaan iyaga ay marka aan tahli karin. Marka dhar aad si fudud u furiin, waxay kaa caawin ilmaha iyo macallinka labada.
Ku rid jadwalka isku dugsiga
Haddii ilmahaagu hurdo gaaban ah ama uu leeyahay waqti deggan ee dugsiga, waan samayn guriga. Waxay ka dhigi doonaa sahlaysaa inay raacaan caadiga ah dugsiga.
Reading waa caado wanaagsan in la bilaabo marka caruurtadu aad u da 'yar. Reading caawisaa ilmahaaga si fiican dugsiga. Isku day in ilmaha wax u akhrido dhowr jeer toddobaadkii iyo wakhtiga hurdada. Haddii aadan si fiican u aqoon Ingiriis, raadi buugta majaajiladu oo weydii ilmahaaga inuu kuu sheego waxa ka dhacaya sawirada. Waxa kale oo aad bilaabi kartaa barashada warqado Ingiriisi wada.
dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe
Ilmahaagu bilaabi doonaa fasalka koowaad ee da'doodu ka yartahay shan. Waxaa ka mid ah fasalada dugsiga hoose dhexe iyo 1 Si aad u 8.
Saar aad shaqada guriga ee caadiga ah
Children ee dalka Mareykanka helo nooca shaqada guriga maalin kasta. Waa in aad ku dhiirigalin in ay sameeyaan wax kasta oo ugu yaraan habeen walba. Haddii aadan fahmin waxa aad ka shaqeeya, isaga weyddiista in uu kuu sheego si. Isku day inaad si ay u caawiyaan marka aad awoodid.
Ka hubi macalinka
U hubso in aad ka qayb galaan fadhiyada waalidiinta iyo macalimiinta si aad u ogaato sida kartida ilmahaaga. Haddii aad u baahan tahay turjubaan, u sheeg ilmahaaga inuu hore macallimiinta weydiisaan. Ha ka baqin inaad la hadasho macalinka oo ku saabsan wax kasta oo keeni karta.
Waxaan sii reading!
Read buugaagta carruurtaada maalin kasta ilaa ay akhristayaasha ugu hadla. Haddii aadan aqoon Ingiriisi, waxaad weydiisan kartaa ilmaha in ay kuu aqriyaan in turjumaad English. Carruur badan oo doonayaa inaan u ciyaaro kulan video ama daawado TV ama wadaagaan on shabakadaha bulshada wakhtigan. Iska hubi in ay doortaan in ay waqti iyo muujiyo in hawsha reading.
Carruurtu waxay badanaa bilaabaan dugsiga sare marka ay yihiin da'da afar iyo toban ama shan iyo toban. dugsiga sare keentaa la caqabado kala duwan.
Hay ilmahaaga dugsiga maalin kasta hadlaya
Da'daan, ilmahaaga ma idiin sheego sida ugu badan waxaa loo isticmaalaa in lagu. Ku dhiiri geli in ay ka hadlaan waxa ay bartaan iyo sida ay u dareemaan.
Haddii ilmahaagu ku jiro ciyaaraha ama howlaha, tag in ay haddii ay suuragal tahay. Waalidiinta ee dalka Mareykanka taageertaa carruurta by muuqashada. Waxa kale oo ay kaa caawin karaan inaad la kulanto dad badan ee bulshada.
Hadlay oo ku saabsan talaabooyinka soo socda
dugsiga sare waa marka ardayda bilaabaan oo dalka Mareykanka ah ee qorshaynta in ay Jaamacadda. Ku dhiiri geli carruurtaada in qorshahooda. Kaalmo ka heli karto dugsiga qorshaynta shaqooyinka iyo kuliyadaha.
Speaks mid ka mid ah Maraykanka inay dumarka soo galootiga ah oo ku saabsan caqabadaha soo food bilowga dugsiga sida ilmo. Talooyin Qaar ka mid ah ku saabsan sida loo caawiyo ilmahaaga.
Hay ammaankaaga on warbaahinta bulshada
Sidee ayaan u tagtid kulliyadda?